June 2019 | အ င်္လ ကာ ည
HR diploma ရှိထားပြီဆိုရင်တောင် အလုပ်ကမရနိုင်သေးဘ...
HR diploma ရှိထားပြီဆိုရင်တောင် အလုပ်ကမရနိုင်သေးဘူးလား???
9:10 AM | Labels: ဆောင်းပါး
HR diploma ရှိထားပြီဆိုရင်တောင်
Excel - ပထမ
Word - ဒုတိယ
Powerpoint - တတိယ
Pagemaker - စတုတ္တ
HR assistant ကနေManager level ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီဆ်ုတာနဲ့HR လုပ်ငန်းစဉ်တော်တော်များများက
Excel နဲ့ပတ်သတ်မှုရှိတာများပါတယ်Formula တွေကိုယ်တိုင်အသုံးပြုနိုင်အောင်လေ့လာသင်ယူပြီးကျွမ်းကျင်ထားဖို့လိုပါတယ်. ဥပမာရုံးတက်ရုံးဆင်းကိစ္စတွေ... အချိန်ပိုတွေ... လစာတွက်ချက်တာတွေကအစexcel ကနေအသုံးပြုတာများပါတယ်
Word - အများစုကတော့ရုံးစာတွေကိုWord နဲ့ရိုက်တာများပါတယ် Pagemaker ကအသုံးနည်းပါတယ် မိမိကျွမ်းကျင်တဲ့app ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
စာရိုက်ရာတွင်လည်းZawgyi Font ကိုအသုံးပြုရုံနဲ့မရသေးပါဘူးMyanmar3နဲ့Win font တွေလည်းကျွမ်းကျင်စွာစာရိုက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်
Powerpoint - Presentation တင်ပြဖို့ဖြစ်ဖြစ် Monthly , Annual Report ,စသဖြင့်လုပ်ဆောင်ရသည်အခါPpt ကိုကောင်းစွာအသုံးပြုတတ်အောင်နားလည်ထားဖိူ့လိုပါတယ်
HR diploma တွေကနိုင်ငံခြားကရယူတာပါအဲ့ဒီမှာမြန်မာအလုပ်သမားဥပဒေတွေထည့်မသင်ပါဘူး
မိမိဘာသာလေ့လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊မြန်မာအလုပ်သမားဥပဒေအကြောင်းသင်ပေးတဲ့သင်တန်းမှာဖြစ်ဖြစ်တက်ရောက်လေ့လာထားသင့်ပါတယ်... အကြမ်ဖျင်းသိထားရုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး(Diploma လက်မှတ်ကိုင်ထားရင်ပိူမိုပြည့်စုံသင့်ပါတယ်.)
၄) SSB လူမှုဖူလုံရေးအကြောင်းတွေကောသိထားပြီလား?
၅) အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားသဘောတူစာချုပ်( Employee Contract)
EC - ထဲမှာအချက်အလက်ပြည့်စုံနေဖို့အပြင်နောက်ဆက်တွဲ(က) (ခ) အတွက်ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုမည့်အချက်အလက်တွေကိုလည်းHR သမားတိုင်းသိထားသင့်ဖို့လိုပါတယ်...
၆) ဝင်ငွေခွန်( Personal Income Tax -PIT)
၇) Information Technology သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအင်တာနက်ကိုကောင်းကောင်းအသုံပြုနိုင်ပြီလား?
HR သမာတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဝန်ထမ်းရှာဖွေရေးတွေဆောင်ရွက်ရပါတော့မယ်ကုမ္ပဏီအတွက်. ဝန်ထမ်းကောင်းတွေရှာဖွေဖို့အတွက်Email နှင့်ပတ်သတ်၍အသုံးပြုတတ်ရမည့်အပြင်Social media တွေ၊တစ်ခြားRecruitment method တွေကိုလည်း, အသုံးချတတ်အောင်ကျွမ်းကျင်နားလည်ထားရပါမယ်..
၈) office Document ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာစာဝင်စာထွက်နှင့်ရုံးဖိုင်တွေနှင့်ပတ်သတ်၍ကောစီမံနားလည်လေ့လာထားပြီးပြီလား??
စသဖြင့် HR လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သတ်သောရုံးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းလေ့လာပြီးနားလည်တတ်ကျွမ်းထားဖို့လိုပါတယ်။
၉) Employee Hanbook အကြောင်းလေ့လာထားပြီးပြီလား?
၁၀) KPI (Key Performance Indicator) အကြောင်းလေ့လာထားပြီးပြီလား?
ဒီအတွက်ကြောင့်HR diploma ရရှိပြီးပြီဆိုရင်